ကျွန်တော်မတတ်သော ccna နဲ့ ကျွန်တော်တက်သော ccna — MYSTERY ZILLION
ကျွန်တော်မတတ်သော ccna နဲ့ ကျွန်တော်တက်သော ccna
October 2008 edited November 2009 in Networking
ကျွန်တော်ကို network စစချင်းအပင်ပန်းခံသင်ပေးသော Ko Win Thein Aye ( SG )
ကျွန်တော်မတက်သမျှကို သည်းခံပြပေးသော Linkyi ( SG )
ကျွန်တော်ကို သင်ပေးသော ဆရာမ Ma Ei Khine ( SG )
ကျွန်တော်ရဲ့သူငယ်ချင်း ရှမ်း ( SG )
ကျွန်တော်တို့ပြန်ရှင်းပြရတက်တေသာ Kyaw Soe ( SG )
ကျွန်တော်တို့ ဆရာ Sweety ( SG )
တို့ကို အရမ်းလွမ်းပါတယ် ..... ကျွန်တော်ဟာ အားလုံးရဲ့ တပည့်ပါ ..... ကျွန်တော်လဲ့ တစ်နေ့ ဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီး လုပ်နေတာမဖြစ်ပဲ စိတ်ဓာတ်ကျစွာနဲ့ အခု CCNA ပြန်တက်နေပါတယ်.........
အရာအားလုံးဟာဖြစ်နိုင်ရက်နဲ့ မဖြစ်ဘူးဆိုရင် :2:
ဒီအာဘော်တွေဟာ ဆရာဦးသိန်းထွန်းဦးရဲ့ အာဘော်တွေပါ ( ၀န်ခံခြင်း )
1..... CISCO ဟာ certified levelက အရင်တုံးက နှစ်ခုပဲ ရှိပါတယ် ... အဲဒါ ဘာတွေလဲဆိုတော့ CCNP,,, CCIE ရယ်ပါ..... နောက်မှ ၄ခု ရှိလာပါတယ် ....
2..... CCNA ဟာ 1998 ခုနှစ်မှာစတင်ပြီးထွက်ပေါ်လာသော certified ဖြစ်ပါတယ် .... CCNA မှာကိုပဲ ဗားရှင်းသုံးခုရှိပါတယ် ( 1998 . 2000 ... 2002 ) ရယ်ပါ အဲဒီမှာ single exam ဆိုပြီးတစ်ခုတည်း ဖြေပြီးတော့ CCNA ကို ရယူနိုင်ပါတယ် .....
3..... CCNA ကို exam တစ်ခုတည်းဖြေပြီးရနိုင်သလို.... two exam ဖြစ်တဲ့ INTRO နဲ့ ICND ဆိုပြီး ၂ခုဖြေပြီး၁ခုတဲ့ ဟာလည်းရှိပါတယ် .... အဲဒါကိုအရင်တုံးက Inspiration မှာ သင်ဖူးတယ်ပြောကြပါတယ် ..... ၂ခုဖြေလည်း ဒါပဲ ...တစ်ခုဖြေလည်းဒါပဲဆိုတော့ တစ်ခုတည်းဖြေလာကြတာများလာပါတယ်
CCNA exam ကို2007 မှာပြောင်းလိုက်ပါတယ် အဲဒါဘာလဲဆိုတော့
ICND 1 ရယ် ICND2ရယ်ပါ
နှစ်ခုပါ INTRO ရယ် ICND ရယ်မဟုတ်တော့ပါဘူး ....
ICND ( 640-822 ) ဖြေရင် Cisco Certified Entry Networking Technology ဆိုတဲ့ ( CCENT ) တနည်းဆိုရင် SOHO ပါ ( smaill office Home Office ) ....
ကျွန်တော်ထင်တယ် certificate လိုချင်ရင် အဲဒီ 1 &2ဖြေပါ .... ICND ဖြေပြီးရင် CCENT ရပြီး ICND2ဖြေပြီးရင် CCNA ရပါမယ်.... ဒါဆို certificate2ခုပေါ့
အင်း 802 ဖြေရင်တော့ တစ်ခုတည်းကို ပဲရပါမယ်.... ကြိုက်တာဖြေလို့ရပါတယ် .... CCENT ဟာ small Enterprise မှာ သုံးလို့ရပါတယ် ......
ဒီညတော့ ပင်ပန်းလို့ နောက်နေ့ကြ ဆက်ရေးပါမယ်ဗျာ
ဆက်ရေးပါဗျို့။ ccna ကို စိတ်ဝင်စားသူများ၊ ccna ဖြေဖို့ကြိုးစားနေသူများအတွက် အရမ်းအကျိုးရှိတဲ့ ရှင်းပြချက်လေးတွေပါ
မြန်မာပြည်မှာ CCNA ဖြေလို့မရပါဘူးခင်ဗျာ... အဲ ဖြေချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Thai ဒါမဟုတ် SG မှာ သွားဖြေကပါမယ် .... CCNA က တစ်ခု ကဘာလဲဆိုတော့ ယိုးဒယားမှာဖြေလည်း ဒီစျေးပါပဲ ... စင်ကာပူမှာ ဖြေလည်း ဒီစျေးပါပဲ ... ကျွန်တော်တို့ Microsoft လို့မဟုတ်ပါဘူး မိုက်ကရိုဆောလ့်က နိုင်ငံကို လိုက်ပြီး ဖြေကတဲ့ စျေးတွေ ပေးကပါတယ် မြန်မာပြည်မှာ ကစျေးတော်တော်ပေါတယ် ... ယိုးးဒယားမှာဆိုရင်လူမကျပ်ဘူး ဖြေကတာ မြန်ပါတယ် ... အကုန်အကျလည်း သက်သာပါတယ် ... အဲစင်ကာပူမှာ ဆိုရင့်တော့ နေစရိတ် စားစရိတ်လေး စျေးကြီးတာ တူတူပါပဲ ... 250 လားမသိဘူး ပေးကမယ်နဲ့တူပါတယ်
မေးခွန်းအကြောင်းဆက်ပါမယ် 2007 မှာဖြေမှာ 2002 အရင်လိုမဟုတ်တော့ပါဘူး
1 . Multiple Choice
4. Simulate lab ( sim )
5. Simlet ဆိုပြီး ပေးထားပါတယ်
ကျွန်တော် တစ်ခုချင်း ရှင်းပြပါမယ်
အဲဒါကတော့ ထွေထွေထူးထူးမရှင်းပြတော့ပါဘူး .... သူမှာက တစ်ခုတည်းဖြေကမယ်ဆိုတဲ့ Single Choice,,, နောက်ရွေးကတဲ့ Multiple Choice ရယ်ပါ .... မိုက်ကရိုဆော်မှာ အဖြေက ၃ ခု ပါ အဲ ၃ခုလုံး မှန်တယ်ဆိုမှ အမှတ်ရပါတယ် ... ဘယ်ဟာကို ဘယ်လောက်အမှတ်ပေးတယ်လို့တော့ Certificate ပေးတဲ့ သူအကုန်လုံး လှို၀ှက်ထားပါတယ် .... CISCO မှာက အဖြေက ၃ ခုဖြေကမယ် အဲ ၁ ခု မှန်ရင် လဲ တစ်ခု ဖိုးအမှတ်ပေးတဲ့ ပုံစံလေး လုပ်ထားပါတယ် ... ဖြေတဲ့သူဘက်က ကိုက်ပါတယ်
ဒါကတော့ ထွေထွေထူးထူး မရှင်းပြတော့ပါဘူး ..... Test လုပ်ကမဲ့ှquestion တွေပါ
3. Drag & Drog
အဲဒါကတော့ မိုက်ကရိုဆော့လ်က အတိုင်းပဲ ထင်ပါတယ် ဆွဲချကတာပါ....
4. Simulated Lab ( Sim ) ပါ
အရင်တုံးကလိုမဟုတ်တော့ပါဘူး .... အရင်တုံးက လုပ်ခိုင်းထားတဲ့ ပုံစံအတိုင်း CMD ရိုက်ရုံနဲ့ ရပါတယ်အ ခုတော့ ပြောင်းသွားပါတယ် ..... Trouble shootလုပ်ခိုင်းတာပါ ..... သူက ကိုယ်ရဲ့ Professional Skill ကိုစစ်တာပါ ... ပြသနာတွေကို router တစ်ခု ဒါမဟုတ်တခြား switch တွေကို Configure ချိန်းပေးကတာပါ .... ဥပမာ မှားနေတဲ့ CMD ကိုပြန်ပေးကတာပါ
အခက်ဆုံးပါပဲ ... သူမှာ network simulator... Changing the configuration.... မှားနေတဲ့ ဟာကို ပြထားပြီး အများကြီးထဲက အမှန်တစ်ခု ရွေးခိုင်းတာ လဲ ပါနိုင်ပါတယ် .... Simulated နဲ့ Testlet နှစ်ခု ပေါင်းထားတာပါ....show cmd ကိုခေါ်လို့ရပြီး Networking Theory နဲ့ configuration cmd တွေ ကို စစ်ထားတာပါ .... Cisco ဟာ ကျွမ်းကျင်မှုကို ဦးစားပေးပါတယ် .... နောက်ဆုံးပြောချင်တာ cmd တွေ ရိုက်ပြီးသွားရင် save running config ကို လုပ်ပေးကြပါ လို့ ( cmd ) မှားရင် ခွင့်လွှတ်ပါ ကျွန်တော် မစမ်းတာ ကြာနေလို့ပါ
တစ်ခါတစ်ခါ ကြရင် Cyberhack က ရေရေရာရာမပြေဘူး လို့ပြောချင်ပြောပါလိမ့်မယ် .... ကျွန်တော် ပြောရင် မှားမှာဆိုးလို့ပါခင်ဗျာ .... သေချာမှ စလေ့လာသူတွေ အခက်အခဲ မဖြစ်အောင်လို့ပါ .....
အိုကေ Exam အတွက် ICND 1 နဲ့ ICND2နှစ်ခု ဆက်စပ်ပြီး သင်တဲ့အကြောင်းလေး ရေးပေးပါမယ် ။။။။။ ကျွန်တော်တို့ Microsoft မှာတုံးကလို 270 နဲ့ 290 ကိုတွဲသင်သလိုပါတဲ နှစ်ခု က ဆက်စပ်နေပါတယ် ....
Network Fundenmentals--- Lan Switching ဒီနှစ်ခု သင်ပြီးရင်
Lan Switching နဲ့ တွဲသင်ပါတယ်
အဲဒီနှစ်ခုအကြောင်ကို တွဲသင်ပါတယ် ..... Network Layer တွေသင်ပြီးမှာ အားလုံးဟာ နားလည်နိုင်မှာမို့လို့ Lan Switching ကိုသင်ရပါတယ် .... အဲ ပြီး ရင် Inter အဆင့်ဖြစ်တဲ့ Lan Swtiching ဘက်ကို သွားပါတယ် .....
ICND2ကနေပြီး Land Swtiching သင်ပြီးရင် ICND 1 ကနေပြီး IP Routing ကိုသင်ယူရပါတယ်
IP Routing ပြီးရင် Routing ကိုအလုပ်လုပ်တဲ့ Protocol ကို သင်ယူရပါတယ်
ှSwitching သင််ပြီးမှ ဘာလို့ Routing သင်ရတာလဲမေးချင်မေးကြပါတယ် ... Switching က Routing လောက် Function မများသလို အနည်းငယ်လွယ်တယ်လိုဆိုချင်ဆိုလိမ့်ပါမယ် ... Layer3Swtich တွေဆိုရင် Router လို Firmware ပါပါလာပါလိမ့်မယ် ...ဖောရင်းနဲ့ (sorry နော် ) ဆက်မယ်
Wan အကြောင်းသင်ရပါမယ် .....ပြီးရင်
Wan အကြောင်းဆက်သင်ရပါမယ် ................ Scaling the IP address ကိုသင်ယူရပါအုံးမယ်
ICND2မှာ VLSM တို့ ဘာတို့ ပါပါသေးတယ်
ICND 1 & U Thein Tun Oo
ICND ( 1 ) Chapter 1 ( Introduction To computer Network Concepts ) ဒီအခန်းက အခန်း ( ၂ ) ကိုသွားဖို့အတွက် လုပ်ပေးထားတာပါ ... ဒီအခန်းမှာ ဘာတွေရေးထားတယ်ဆိုတာ Network ကို Logical ရေးထားတာပါ ..... Physical ပိုင်းကို သွားဖို့ပါ ဥပမာ ကျွန်တော်တို့က Network ကို ဘယ်လို လုပ်မှာလဲ ဘယ်လိုပြေမှာလဲ စဉ်းစားကတာ Logical ပိုင်းပါ ..... အဲ ဒါကို ချပြီး လုပ်ပြကတာ Physical ပိုင်းပါ .....
ကျွန်တော်တို့က End use device အင်တာနက်ကို ချိတ်တာကြည့်ရင် လွယ်ပါတယ် home user ဆိုရင် DSL ကနေပြီး Cable ကတဆင့် အင်တာနက် cloud ကိုသွားပါတယ် .... Office ကြတော့ ကွာသွားပြီ သူက wall plate ကနေပြီး ချိတ်တာနဲ့ ရပါပြီ .... တချို့ရုံးတွေမှာဆိုရင် Office မှာ Data ကော Voice ကောပါသွားပါတယ် .... သူကတော့ Data center ကခွဲပေးတာပါ .... Patch တွေနဲ့ ထိုးပြီး ခွဲပေးကတာပါ ..... ထားတော့ ( ရောကုန်မယ် ) ဘယ်ကြီးနံပါတ်က ဘယ်လောက် ... ဖုံးနံပါတ်က ဘယ်လောက်ဆိုပြီး တွဲထိုးပေးကတယ်... သုံးတဲ့ဖုန်းကလဲမတူတော့ဘူး .... ဆက်မယ်နော် ပြီးသေးဘူး
ကျွန်တာ် ၃ မျက်နှာလောက် ကျော်ချမယ်ဗျာ သိပြီးသားတွေမို့လို့..... အိုကေ
ICND 1 TCP / IP and OSI Networking Model
TCP / IPကို အခုနောက်ပိုင်း OS တော်တော်များများ ( အားလုံးနီးပါ ) ဟာ support လုပ်ထားကြပါတယ် .... အခုနောက်ပိုင်း Cell Phone တွေ လျှပ်စစ်ပစည်းတွေ တော်တော်များများကိုလည်း TCP/ IP ကို support လုပ်ကြပါတယ် ...... TCP/Ip ကို လျှပ်စစ်ပစည်းတွေ surppot လုပ်ရင် ဘာအသုံး၀င်မလဲ မေးစရာရှိလာပါတယ် ...... ခင်ဗျားတို့ Hp ကနေပြီး TCP/IP ချိတ်ထားတဲ့ အိမ်သုံးပစည်းတွေ ရဲ့ ဒေတာတွေ .... အပိတ်အဖွင့်တွကို အလွယ်တကူ လုပ်နိုင်ပါတယ် ......
OSI Model ပေါ်လာတာ ဟာ အလွယ်တကူ မဟုတ်ပါဘူး ... ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုလောက် နေပြီးမှ ထွက်လာတာပါ .... ကြားထဲမှာ IBM ကနေပြီး SNA ( Systems Network Architecutre ) ဆိုပြီး သူရဲ့ Large Network မှာသုံးဖို့ဆိုပြီး လုပ်ခဲ့ပါသေးတယ် ..... အင်တာနက်ဟာလဲ ( 1970 )မှာ စတင်ပြီးပေါ်လာပါတယ် ..... အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာ အမေရိကန်ဟာ Coldwar အတွက် TCP/IPကို University တွေမှာ စမ်းသပ်မှုတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ် ........ ( တစ်မျက်နှာတည်းစာကို မရှင်းပြတက်လို့ အတိုချုံပြီး ရှင်းပြလိုက်တာပါ ခွင့်လွှတ်စေချင်ပါတယ် )
TCP/IP ဟာ ဘယ်လိုအသုံး၀င်သလဲဆိုတာ
TCP/IP definesalarge collection of protocols that allow computers to communicate.....
ဒီလိုဖတ်လိုက်ရင် ရှင်းသွားပါတယ် ... ကျွန်တော် ဘာသာမပြန်တက်တော့လို့ပါ ။
TCP/IP Architectural Model
အဲဒါကတော့ လူတိုင်းသိပြီးသားပါ ..... Application..... Transport........ Internet...... Network Access ပါ
Application ..... အဲဒါတော့ နည်းနည်း ရှင်းပါမယ် ... ကျွန်တော် ကိုယ်ဟာကိုယ်စာဖတ်တုံးကပေါ့ Application Layer ဆိုတာ Application တွေလို့ထင်နေတာပါ ...အခုထိပါပဲ ... တစ်ကယ်တော့ Application တွေကို ခေါ်တာမဟုတ်ပါဘူး Application တွေကို service ပေးတာပါ ... ဥပမာ ကျွန်တော်တို့က IE ကနေပြီး web ကိုခေါ်ကြည့်ပါတယ် ဒါဆိုသူက HTTPဆိုတဲ့ service ကို ပေးလိုက်တာပါ .... အိုကေ ကျွန်တော်တို့က Mail ပို့မယ် ဒါဆိုသူက SMTP service ကိုယူသုံးူလိုက်ကော .... FTP တို့ ဘာတို့ လည်း ဒီအတိုင်းပါပဲ .... IE browser ကနေပြီး Service အမျိုးမျိုးကို ယူသုံးသွားတာပါ ..... Application Layer ဟာ အများဆုံးအပြောင်းအလဲဖြစ်ပါနေပါတယ် .....
ကို CyberHack ရေ CCNA စာအုပ်ကို ရန်ကုန်က ဘယ်နားမှာ ၀ယ်လို့ရနိုင်မလဲခင်ဗျာ... ၀ယ်ချင်လို့ပါ... :d
We are watching your post. carry on bro .
Thanks for your sharing. :6:
ကျွန်တော်က သိပ်မ၀ယ်ဘူး စာအုပ်ဆိုရင် ... အင်ကြာနက်က ဒေါင်းတာများတယ် .. သင်တန်းသက်လို့ ပေးတဲ့ စာအုပ်ပဲရှိတယ် .... လိုချင်ရင် ၀ယ်ပေးမယ်လေဗျာ .... သင်တန်းမှာ ရမယ်ထင်တယ်:d:d
ကျွန်တော် CCNA ပိုစ် ဖတ်ရင် ပြင်းမှာဆိုးလို့ပါ .... နက်ငေါ့အကြောင်းလေး cmd အကြောင်းလေးတွေ ပါ ရေးသွားပါမယ် .... စာဖတ်သူများ ဘယ်လိုဖြစ်စေချင်ပါသလဲ ..... ကျွန်တော်သိချင်ပါတယ် CCNA သီးသန့်ရေးရမလား .... လေ့ကျင်ခန်း ( ကျွန်တော် တက်သလောက် ) လေး ထည့်ရေးရင် ကောင်းမလားပါ .... အကြံ မြန်မြန်ပေးကြပါဦး:6:
ရေးတာ အရမ်း မြန်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။ နည်းနည်းလေး အသေးစိတ် in detail လေး ရေးပေးနိုင်ရင် ပိုကောင်းမယ် ထင်ပါတယ်။
အရမ်းမြန်တာမဟုတ်ဘူး.... ဖတ်ရင်းနဲ့ လည်နေလို့ ဟီး
ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် တိုင်ပတ်နေလို့ပါဗျာ ... စိတ်မရှိကြပါနဲ့နော် .... ကိုယ်ဟာကိုယ် ဖတ်နေတုံးတော့ အိုကေပဲ ... ပြန်ချရေးရင် တိုင်ပတ်နေလို့ပါဗျာ... စိတ်မရှိကြပါနဲ့နော်
Yes good post.. carry on .. i am interesting in Tcp/Ip...
related to VOIP..
arr pae par tae.. khin byar. :41:
များများဖတ် ရဲရဲရေး လိုတယ်ထင်ရင် ကိုတွီတီနဲ့ ကိုမာ့ခ်တို့ ဝင်ပြီးထောက်ပြလိမ့်မယ်။ ဘာမှပူနဲ့။:d :67::67:
ဖြစ်နေကြ ပြသနာ လေးတွေ ။... ကျွန်တော်တို့ အင်တာနက်ကို ကြည့်တယ် Http နဲ့ ဘာတွေပါသွားမယ်ထင်လဲ ... ကျွန်တော်တို့ က အင်တာနက်ကို လှမ်းချိတ်လိုက်တယ် ဥပမာ www.google.com ပေါ့ဗျာ အဲ သွားတဲ့ ဒေတာက get file ...... Body အပြင် Header ပါထည့်ပေးလိုက်တယ် အင်းသိတယ်မဟုတ်လား ဆာဗာက ပြန်ဖတ်ပြီး response ( မှားရင် ပြင်ပေးကြပါ ) ပြန်ပေးတယ်..... ဆာဗာမှာ မရှိဘူးဆိုတာ error 404 ပါ မြင်နေကြလေးတွေပါ..... return code 200 ကတော့ request is being processed. လေးပါ ..... အဲလို ချိတ်ဆက်တာဟာ same layer interaction လို့ခေါ်ပါတယ်..... layer တွေ တစ်ခုချင်း ငုံသွားတာကိုတော့ adjacent-layer interaction လို့ခေါ်ပါတယ် ........
ွှThe TCP/IP Transport Layer
Transport Layer မှာ အဓီက protocol ကနှစ်ခုတည်းပါ ဗျာ .... TCP နဲ့ UDP ပါ ...... TCP က error recovery ပါလုပ်ပေးတယ် .... UDP ကတော့ မလုပ်ပေးဘူး ...... အင်း အထူးတော့ပါဘူး
The transport layer header and its encapsulate data , is calledasegment ..... ( ဖတ်ကြည့်စေချင်ပါတယ် )
transport layer header နဲ့ အပေါ်က application က ဒေတာ ကိုပေါင်းပြီး ထည့်လိုက်တာကို encapsulate လို့ခေါ်ပါတယ်....
ဒေတာကို ဖျက်ချလို်က်ရင်တော့ dencapsulate ( စာလုံးပေါင်း မကျိန်းသေ ) လို့ခေါ်ပါတယ်.....
ခင်ဗျားတို့ သိကမှာ ဒေတာ ဥပ်မာ Http get ပေါ့ဗျာ ဆာဗာ ဆီကို ပို့လိုက်ရင် TCP header ပါထည့်ပေးလိုက်ရတယ် ...... အဲဟိုက ( ဆာဗာ )စစ်ပြီး ACK ပြန်ပိုတယ် ပြီးတော့မှ ok ဆိုပြီး ပြန်ပိုတယ် ..... နည်းနည်းရှုပ်နေပြီ သိတယ် ( ကျွန်တော်လည်း ရိုက်လက်စ နဲ့ မထူးတော့လို့ )
Same layer interaction on differnt computers
The two computer useaprotocol to communicate with the same layer on another computer. The protocol defined y each layer usesaheader usesaheader that is transmitted between the computer , to communicate waht each computer wants to do..
Adjacent layer interaction on the same computer
Onasignal computer, one layer providesaservice toahigher layer . The software or hardware that implement the highest layer requests that the next layer perform the needed function......
နောက်အခန်း ရောက်ရင် ဒီထက်ပို ရှင်းအောင် ကျွန်တော် ရေးပါမယ် .... ဒီအခန်းတော့ သည်းခံပြီးဖတ်ပေးကြပါ ... မှားရင်လဲ ပြင်ပေးပါနော်
ဒီလိုရေးမှလဲ ကျွန်တော် စာပြန်ဖတ်လို့ပါ
CCNA question ပါ..... Java VM ရှိမှတော့ရပါမယ်
http://www.sendspace.com/file/5fnp50 [URL="[url]http://www.sendspace.com/file/5fnp50[/url]"]ဒီလင့်လေးပါ [/URL].
အရမ်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အဲလောက်စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ ရေးပေးနေတာကို ..... :77:
CCNA လိုပဲ MCSA ကို ရေးပေးနိုင်တဲ့သူတွေရှိရင် ... လုပ်ပေးကြပါဦး .... :77:
CCNA စာအုပ်တွေကို အမေ့အိမ်တို့လို ပညာရွှေတောင်တို့လို စာပေလောကတို့လိုဆိုင်တွေမှာ ၀ယ်လို့ရပါတယ်။
INTRO နဲ့ ICND ။ အခု ဗာရှင်းအသစ် CCNA စာအုပ်တွေကတော့ မရောက်သေးဘူး ထင်တာပဲ။
အကောင်းဆုံးကတော့ ebook ပဲ။ ebook နဲ့ ဆွဲသာဆွဲ ဆရာရေ။ ဟိုစာအုပ်တွေက စျေးကလည်း ကြီးသေးတယ်။ တစ်အုပ် ရှစ်ထောင်၊ တစ်သောင်း။
နောက် BC နဲ့ American Center တို့မှာလည်း ရှိတယ်။ အဲမှာ စာကြည့်တိုက်မန်ဘာ၀င်ပြီး ငှားရင်တော့ရတယ်။ CCNA အပြင် တစ်ခြား IT စာအုပ်တော်တော်များများရှိတယ်။ IT စာအုပ်တွေဆိုရင်တော့ BC က ပိုစုံ၊ ပိုများတယ်။
Grand Meeyatha ဟိုတယ်ရှေ့က အာရုဏ်သစ်စာပေမှာ ၀ယ်လို့ရပါပြီ version အသစ်တွေပါ ရောက်ပါပြီ။ ICND1 က ၉၀၀၀ ကျပ် နဲ့ ICND2 က 12000 ပါ။ အိမ်မှာ ကွန်ပျူတာမရှိတဲ့ သူတွေအတွက် Ebooks ကအဆင်မပြေ နိုင်ကြဘူးလေ ကျွန်တော်အပါအ၀င်တော့ .. Ebooks တွေကတော့ အလုပ်ရောက်မှ ဖတ်လို့ရပါတယ်. :d
အခုရေးတာ lesson2ပဲရှပါသေးတယ်.... ရှေကမဆက်နိင်သေးလို့ပါ .......
ဒီည ဆက်ရေးပါမယ် ......
CCNA မှာ ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံး က
Lesson3နဲ့ lesson4ပါ
ဘာ်မှာမှ ရှာမတွေနိုင်သော သင်ခန်းစာပါ ..... LAN နဲ့ Wan အကြောင်းပါ
If anyone of you want ebooks. download here
ကျွန်တော် ဒီနေ့အရမ်းပျော်ပါတယ် ... အင်တာနက် ပြန်ရသလို .... ကျွန်တော် Topic လေးကို ကြိုက်တယ်လို့ အပြောခံရလိုပါ:D
မှတ်မိသလောက် Chapter (2) ( The TCP/ IP internet Layer ) ( network Layer )
အင်တာနက်ပေါ်မှာ End application to End application လုပ်တာတော့ ဟုတ်ပါပြီ ... ကျွန်တော်တို့က အင်တာနက် ကိုတက်တဲ့အခါ system တွေအများကြီးကို addressing လုပ်တော့ ကျွန်တော်တို့က ip တွေထည့်တော့ router ကနေပြီး ဘယ်ကိုသွားမှာလဲ local လား internet လားဆိုတော့ လုပ်ကပါတယ် .... local ဆိုရင် တော့ မလိုပါဘူး .... အဲ internet ဆိုရင်တော့ ခွဲခြားကပါမယ် ..... local ဆိုရင်တော့ same network နဲလုပ်ပါတယ်။။။ internet ဆိုရင်တော့ addressing နဲပအလုပ်လုပ်ပါတယ် .... အဲဒါက အကုန်လုံး standard တစ်ခုလုပ်ထားပါတယ် .... အဲလို local နဲ့ internet ကိုခွဲခြားပေးတဲ့ protocol ကို internet layer လို့ခေါ်ပါတယ်..... inetner protocol က addressing နဲ့ routing ကိုလုပ်ပေးပါတယ်.... local ကိုပေးတာဟာ addressing ပါ .... အဲဒါကို route လုပ်ဖို့က network address နဲ့ hosts address နဲ့ ခွဲတာပါ..... အဲဒါတွေအကုန်လုံးကို ခွဲခြားပေးတာ internet layer ပါ... internet layer ကို end host to end host လို့ခေါ်ပါတယ်။.... ip မှာ ၂မျိုးပဲရှိပါတယ်.... အဲဒါ host နဲ့ Gateway ပါ။။..... hosts ကတော့ အကုန်လုံးရှင်းပါတယ် .... ip addressing asing လုပ်ထားတဲ့ every device ကို Hosts လို့ခေါ်ပါတယ်....... Gateway ကတော့ device တစ်ခုထက် ပိုပြီးရှိနိုင်ပါတယ်.... တခြားအပြင်ကို ထွက်ဖို့ကိုလဲ route လုပ်ပေးတာပါတယ် ( တနည်းခေါ်ရင် router ) ပါ..... single ip adress ရှိရင် host လို့ခေါ်ပါတယ်... IP တစ်ခုထက်ပို့ပြီး တခြားကို route လုပ်ပေးရင် Gateway လို့ခေါ်ပါတယ်
IP service provide to TCP
application layer ကနေဆင်းလာတဲ့ message ကို TCP ကနေပြီး ဆင်းလာတဲ့ segment ကို IP ကနေပြီး IP က Source address နဲ့ Destional address ကိုထည့်ပေးပြီး frame ကိုပို့ပါတယ် .....
အဲလို layer တစ်ခုချင်းငုံတာဟာ အရှေ့မှာ ပြောခဲ့သလို့ ( Adjacent - layer ) ပါ .... Internet layer က သူပို့လို့ local ပဲရောက်ရောက်.... internet ပဲရောက်ရောက် end host to end host delivery လုပ်ပေးလို့ ..... TCP / IP ဟာ end host to end host function ကို TCP / IP အင်တာနက် layer ကလုပ်ပေးပါတယ် ............
နည်းနည်း ရှင်းပါမယ် ကျော်ပြီးတော့....
ဘာလို့ OSI ကိုမရှင်းပဲနဲ့ TCP/IP ကိုချည်း ဖိပြောနေတာလဲပါ
တစ်ကယ်တော့ OSI က ၁၀ စုနှစ်လောက်ပေါ်ပြီး သိပ်မသုံးဖြစ်ပဲနဲ့ TCP/IP ပေါ်လာပြီး ခေတ်စားလာ ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ် .... တစ်ကယ်တော့ OSI ဟာ အခု reference model အဖြစ်နဲ့သာ သုံးကြပါတယ် ...
TCP/IP ဟာ OSI ရဲ ဘယ် layer မှာတူသလဲ ...... နဲ့
Netware ရဲ့ layer ဟာ ဘယ် layer တွေနဲ့ တူသလဲ ရှင်းရာမှာ
OSI ကို reference ယူပြီးရှင်းပြရပါတယ် ........
ဥပမာ တစ်ခုနော် ---- TCP/IP ရဲ့ transport layer ဟာ OSI ရဲ့ transport နဲ့သွားတူပါတယ်... အင်း netware ဘက်ရောက်သွားတော့ SPX ဟာ ဘာနဲ့တူလဲ ရှင်းရင် ရှုပ်ကုန်မှာစိုးလို့ .... OSI ရဲ့ transport နဲ့ပဲသွားတယ်ပါတယ်.... TCP/IP ( transport layer ) + Netware ( SPX ) = OSI transport layer ပါ:106:
Good ur lesson :6:
let's teach next lesson
I wanna sit ccna but not now. :77:
plz kindly also mention ++GST % amount or issue:)
added: : no back or previous button in Cisco Exams :နောက်ပြန်သွားပြီး ပြန်စဉ်းစားဖြေလို့လဲ မရဘူးနော်။
THANKS THAT WE COULD STUDY MORE FROM THESE nice GREAT POSTs sharing nice IT tips and knowledge; *(inclusive of other topics too)
thank လို ဘဲပြောရတော့ မှာပေါ့ နော်
CCNA ကို ကျ နော် self study လုပ်ပြီး sit မည် next 5months ကျ ရင်
ကျ နော် လဲ လိုက် see နေသည် မှား ရင် ညှင်းရအောင် လို လေ....
ပုံမှန် လေးတော့ရေးစေ ချင် တယ် နော်..
အမြဲတန်း ရေးတာကို စောင့်နေသော
စတာ ကျွန်တော်လည်း တချိုဟာတွေ လိုသေးတယ်ဗျာ ရေးသာရေးရတာ...... စိတ်ထဲမဖြောင့်ဘူး
နာမည်ကိုက ရှင်းပါတယ် ..... network access ဆိုပြီး ... Data link နဲ့ Physical ၂ခု ပေါင်းထားတာပါ...... ဒီအကြောင်းကို chapter3& chapter4မှာ ကာဗာ လုပ်ထားပါတယ် ... lan နဲ့ wan အကြောင်းဆိုပြီး ...... ဒီမှာက Mac layer ,, LLC ,,, connector,,,, cable,,, voltage level,,,,,, protocols .,,, တိုကိုသုံးပြီး deliver data across ....
အိုကေ ကျွန်တော်တို့အပေါ်က IP ကနေပြီး package ကဆင်းလာတယ်... အဲဒီတော့ သူက eth header နဲ့ Eth tailer ဆိုပြီး အစနဲ့ အဆုံးကို ထည့်ပြီးပိတ်လိုက်တယ် .... ထူးခြားတာ တစ်ခုရှိတယ်ဗျာ
ဘာလဲဆိုတော့ network access layer မှာပဲ အပိတ်နဲ့အဖွင့်ရှိတယ် ...... သူက နေပြီး ကျွန်တော်တို့ router ကိုသွားတယ် ..... router က serial link ppp နဲ့ ချိတ်ဆက်ထား ရော် အဲတော့ခက်ရော .... ကျွန်တော်တို့ eth က router အပြင်ဘက်ထွက်သွားရင် သူက type ပြောင်းလိုက်ရရော ...... ( ကျွန်တော်တို့လို့ဆီမှာလို့ တပ်ထဲမှာတစ်မျိုး တပ်ပြင်မှာတစ်မျိုး .... သူလူဆိုတစ်မျိုး ကိုယ်လူဆို တစ်မျိုး ) ပေါ့ဗျာ ....အဲလိုပဲ..... သူက ပြောင်းပေးရတယ်....ဘယ်လိုပြောင်းလဲဆိုတော့ ppp header နဲ့ ppp tailer ဆိုပြီး router ချင်းဆက်သွယ်တဲ့နေရာမှာ type ကပြောင်းလိုက်ရတယ်.... မပြောင်းလို့လဲမရဘူးနော် ....:D:D:D:D. ဟိုဘက်ခြမ်းက router ကနေ ပြန်ထွက်တော့ သူရဲ့ နဂို type ethernet frame ကိုပြန်ပြောင်းလိုက်တယ် .... တစ်ခုပြောစရာရှိတယ် ..... အဲလို Links network access မှာပြောင်းတော့ ........ IP datagram ကပြောင်းသွားလား ..... ပြောင်းတယ်လို့ပြောရင် ( မှားပါတယ် :5: ) လုံး၀မပြောင်းဘူးဗျာ ...... Ip datagram ကလုံး၀မပြောင်းဘူး ဘာလိုကျွန်တော် ( ip datagram ) ကို ( package ) လို့မခေါ်လဲဆိုတော့ ရှုပ်ကုန်မှာဆိုးလို့ပါ .... အလုပ်လုပ်ပုံ တွေ တစ်ဆင့်ချင်းတွေကိုလည်း package လို့ခေါ်လို့ရပါတယ် .... ဒါပေမဲ့ ( Package ) ကို သီးသီးခြားခြားခေါ်ချင်ရင်တော့ Ip datagram မှာ ပဲရပါတယ်........... eth ကလည်း frame ကိုပဲနားလည်ပါတယ် ...... သူကမှတဆင့် ဆက်ပြီး Bit stream တွေအနေနဲပ ဆက်လုပ်သွားပါတယ် ............
အိုကေ ( ppp ) မှာ လုံး၀ addressing က အရေးမကြီးဘူးနော် .... ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဒီဘက်ကပိုရင် ဟိုဘက်ကို တန်းရောက်လို့ပါ ... ၀ါးလုံးခေါင်းထဲကို ရေထည့်သလိုပါပဲ ..... နောက် Data လင့် ရဲ့ Hware address ကလည်း ကွန်ပျူတာ တစ်လုံးနဲ့ တစ်လုံးဆက်သွယ်ပေးတာပါ .... ဒီနေရာမှာ ARP ,,, RARP ဆိုပြီးလည်းရှိပါသေးတယ် ......
အင်း စာမေးပွဲမှာ နောက်ပြန်မရတာထက်ကြေက်စရာကောင်းတာတစ်ခုရှိသေးတယ်
router conf လုပ်ပြီးသွားလို့ ပျော်ပြီး next မနှိပ်နဲဗျာ..... startup config လေးလည်းလုပ်ခဲ့ဦးနော်
ဟုတ်ပါ့ နောက်ပြီး ရှိသေးတယ်
Boson Simulator ရဲ့ error တွေ
သူ က redistribution လုပ်ရင် more than2routing protocols ဆိုမရတော့ဘူး:14:
Packet Tracer မှာတော့ရတယ်:)
ကျွန်တော် အခုလောလောဆယ် စာသင်နေလို့ ccna အကြောင်းသိပ်မရေးဖြစ်ပါဘူး....
သင်တန်းသားတွေ ဒူလွန်းလို့ ( သူငယ်ချင်းတွေပါ ) ကျွန်တော်မှာ print screen ရိုက်ပြီး ပြနေရတယ်..... ကျွန်တော် လုပ်ထားတဲ့ဖိုင်လေးတွေ နောက်ပိုင်း ဆက်တင်ပါမယ်... အကုန်လုံး
print screen ရိုက်ထားတာပါ.... ISA လောက်အထိရှိလောက်ပါတယ်.......
ဒီနေ့ ကျွန်တော် IP သင်တယ်... သူငယ်ချင်းတွေကို
သူတို့ကောင်းကောင်းလည်သလို့ ကျွန်တော်လည်း နည်းနည်းမူးနောက်နောက်ဖြစ်လာတယ်
နောက်ဆုံးနားလည်အောင် သင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်.. ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်ကို ပညာတစ်ခုပေးလိုက်တယ်
ကျွန်တော်က ဒီအိုင်ပီးလေးကို ရလားဆိုပြီး တွက်ခိုင်းကြည့်လိုက်တယ်
255.255.240.192 အဲလိုတွက်ခိုင်းကြည့်လိုက်တယ် ( ဘာရယ်မဟုတ်ဘူး အပျင်းပြေ အာချောင်ပြီး တွက်ခိုင်းလိုက်တာ )
သင်တန်းသားလည် သလို့ ကျွန်တော်လည်း ချွေးပြန်ခဲ့တယ်...
အဖြေကိုအသည်းအသန်ရှာတော့ နောက်ဆုံးက ( မရဘူး ) ဟု ကျိန်းသေထွက်လာတယ်
10 နက်ေ၀ါ့ကို Class C ပြောင်းလို့ရပါတယ် 255.255.255.242 ဆိုပြီး ပြောင်းလို့ရပါတယ်. ဒါပေမဲ့ ပြောင်းပြီးသား နက်ေ၀ါ့ပေ့ါ ဥပမာနော်
172.18.1.3 ဗျာ သူကို subnet ခွဲယူလိုက်တယ်
255.255.240.0 ဆိုပြီး အဲဒါကို ဉာဏ်ကွန့်ပြီး ( ငါဆီရောက်လာတဲ့ အိုင်ပီကို ) ဆက်ခွဲမယ်ဆိုပြီး
255.255.240.192 ဆိုပြီး တွက်ချလိုက်တယ် ( ကောင်းလိုက်တဲ့ဉာဏ် ) ပြသနာက ကွန်ပျူတာမှာ မစမ်းပဲ အပြင်မှာ ကိုယ်ဟာကိုတွက်တာ အိုကေ ရတဲ့ အိုင်ပီကို ကိုယ်ဟာကို ခွဲတယ်ပေါ့... အဲဒီမှာ စပြီးချွေးပြန်ပြီ စက်မှာလုံး၀ထည့်လို့မရဘူး... ခက်ရော်
နောက်မှစဉ်းစားတယ်... ခွဲချင်ရင် တစ်ခါတည်း လုပ်ထား တပ်ပြီးမရဘူး... subnet ့ကအိုင်ပီလို
နောက်က တောင်တောင်မြောက်မြောက်မရဘူး ဥပမာ 172.16.26.4 အဲလိုအိုင်ပီမှာမရဘူးဆိုတာပဲ 255.255.0.0 ဖြစ်ချင်ဖြစ်
255.255.255.0 ဖြစ်ချင်ဖြစ် 255.255.255.248 အဲဒါမျိုးတွေပဲရပါတယ်... အခုတော့ အသေမှတ်မိသွားပြီ ဟီး:D:D
ကျွန်တော်သူငယ်ချင်းတွေကို ကော်ဖီလိုက်တိုက်ကမယ် ( ခေါင်းစားခိုင်းထားလို့ )
ကျွန်တော်အက အရင်က တော်တော်ပိန်းတုံးကပါ..... network layer တွေ ဘယ်လို အလုပ်လုပ်လဲ သိဖို့ ေ၀လာေ၀း တစ်ခါတစ်လေတောင် ဖြောင့်အောင်မပြောနိုင်ဘူး... အခုတစ်လောလည်းဒီအတိုင်းပါပဲ..... ကျွန်တော်ပြောတာ မှားရင်လဲ ၀ုိင်းထောက်ပေးကြပါနော်
error recovery ဆိုတာ tcp ရဲ့ အလုပ်ပါ.... တစ်နည်းပြောရရှုင် မှားနေရင် ပြန်တောင်းပေးတယ်ပေါ့ဗျာ................ ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲဒါကလည်း sender မှအလုပ်လုပ်တာလားလို့ပါ...... အဲဒါတော့နည်းနည်းရှုပ်နေတယ်....
error detection ကတော့ ကျွန်တော်တို့ layer2Data link မှာ Mac နဲ့ LLC ဆိုပြီး နှစ်မျိုးရှိတယ်...... LLC က အပေါ်နဲ့ အဆက်အသွယ်လုပ်ပြီး... MAC ့က physical layer နဲ့ ဆက်သွယ်တယ်..... mac layer က des address နဲ့ source add မှာ အလုပ်လုပ်ပြီး broadcast technology ကိုသုံးပါတယ်..... LLC မှာက FCS ပါတယ်.... တစ်နည်းပြောရင် Data link ကမင်းသားလိုပဲ ခေါင်းပေါင်းပါသလို..... ဖိနပ်လဲပါတယ်..... Header နဲ့ Tailer ကိုပြောတာပါ.... အဲသူမှာ ပါတဲ့ FCS ကနေပြီး အလယ်က DATA နဲ့ Calculate လုပ်လိုက်တယ်...... မတူရင် ဖျက်ချလိုက်ရော..... အဲဒါကို error detection လို့ခေါ်တယ်... မှားရင် ပြန်မခေါ်ဘူး... တန်းပြီးဖျက်ချလိုက်ပါတယ်.......အဲဒါကလည်း လက်ခံသူ ဘက်မှာ အလုပ်လုပ်တယ်လို့ထင်ပါတယ်....
ကျွန်တော်လည်း တောင်တောင်မြောက်မြောက်ပြောရင် layer2ရောက်လာပြန်ရော .. ဟီး:D
၀င်ဒိုး update လုပ်နည်းပါ.... auto မဟုတ်ပါဘူး... အားတာနဲ့ print ရိုက်ထားတာလေး တစ်ခု တင်လိုက်တာပါ....
ကို Cyberhack ရေ.... ကို Cyberhack ရဲ ့သူငယ်ချင်းတွေကို IP Address အကြောင်း သင်ပေးသလိုမျိုး ကျွန်တော်ကိုလည်း သင်ပေးပါလားခင်ဗျာ... IP က ဘယ်ကဖြစ်လာတာ... ဘယ်လိုပေးလို ့ရတယ်... ဘယ်လို တွက်ရတယ်...ဆိုတာမျိုးပေါ့အကိုရယ်... သင်ပေးပါအုန်းနော်... ပြီးတော့ ကျွန်တော်ကိုလည်း နားလည်မလည်သိအောင် တွက်ခိုင်းအုန်းနော်... မျှော်လင့်နေပါတယ်။
Please tell me where we can learn ccna in Myanmar.
I want to becomeanetwork developer.
ကျွန်တော် ဘယ်လို့ရှင်းပြရင်ကောင်းမလဲ ...
အခုတော့ ဘယ်က ဒေါင်းထားမှန်းမသိတဲ့ ဖိုင်တစ်ခု တင်ပေးလိုက်တယ်ဗျာ
ဖြတ်ညှက်ကတ်နဲ့ ကောင်းစားရအောင်လဲ ကျွန်တော်က အဆိုတော်မဟုတ်:D
CSMA / CD က ဘာကို သုံးလဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ နက်၀က်ကဒ်ကို ၀ုိင်းပြီး access လုပ်တဲ့အခါမှာ သုံးတဲ့ algorithm ပါ.... 10 Base တုံးက နက်ေ၀ါ့က တစ်ယောက်က access လုပ်နေရင် နောက်တစ်ယောက်က access လုပ်လို့မရဘူး... အဲတော့ နောက်တစ်ယောက်က လုပ်လိုက်ရင် collection ဖြစ်ပြီး နက်ေ၀ါ့က အလုပ်မလုပ်တော့မှာမို့လို့ပါ... အဲတော့ နက်ေ၀ါ့ ကို access လုပ်ရင် CSMA/ CD ကိုသုံးပါတယ်..... ဆိုလိုရင်းကတော့ network ကို crash မဖြစ်အောင်လို့ပါ.... ( 10 Base ) တုံးကတော့ Baseband ဆိုတဲ့သတော့တရားက တပြိုင်နက်တည်းမှာ workstation တစ်လုံးပဲထက်ပို့ပြီး ဒေတာပို့လိုမရဘူး.... CSMA / CD က carrier sense multiple access with collection ပါ ဘယ်လို့ carrier ကို sense လုပ်လဲဆိုတော့ network မှာ voltage ကိုကြည့်တယ့့် မရှိဘူးဆိုမှာ ပို့တယ်.... carrier sense နဲ့တော့ collection ဖြစ်မှာကို ရှောင်ကြတယ်... တစ်ကယ်လို့ collection ဖြစ်ရင် network ကဒ်တွေက ဂျမ်း ( စာလုံးပေါင်း မသိလို့ ) signal ကို့ လွှတ်တယ်.. ပြီးတော့မှ ပုံမှ အနေအထားရောက်မှ ပို့လွတ်တယ်.. ဒါပေမဲ့ swtich enviroment မှာ ပြောင်းလာပါတယ်..........
WLan က ဘာကိုသုံးလဲဆိုတော့ NB/MA နက်ေ၀ါ့ကိုသုံးတယ်.... NB/MA ( broadband ) ကတော့ non broadcast multi access တပြိုင်နက်တည်းမှာ station အများကြီးက ၀ုိင်းပို့လို့ရပါတယ်.... သူက Multiplexing ကိုသုံးပါတယ်... Layer 1 ပါ.... communication အကုန်လုံးက layer1 ကိုသုံးပါတယ်....
နည်းနည်းတော့မရှင်းဘူး.... ကျွန်တော်လည်း ........... ဒါပေမဲ့ အဓိပါယ်တော့ သိပါတယ်......
broadband နဲ့ baseband ကွာခြားချက်ကို ............
ကျွန်တော်ကို နည်းနည်း ၀င်ထောက်ပေးကြပါဦးဗျာ...........
ကျွန်တော်တို့ လင်းနစ်မှာ user က ဒိုမိန်းကို လှမ်းချိတ်ပြီး ၀င်လို့မရဘူး.... လို့ပြောကြတယ်.... ကျွန်တော်လည်း မစမ်းဘူးဘူး.... မရတာပဲသိတယ်.... ဘာလို့မရတာလဲ ကျွန်တော်ထင်တယ် တစ်ချိန်ကြရန် ဒိုမိန်း ချိတ်တာ ခေတ်ကုန်သွားလောက်တယ်... အဓိကခေတ်စားနေတာအခုက share ပဲလုပ်နေကြတယ်... company တစ်ခုမှာ computer မလောက်လို့ ဒိုမိန်းမှာ လူအများကြီးထည့်ပြီး လူအများနဲ့ ကွန်ပျူတာအနည်းကို ရှယ်ပြီးသုံးတယ်.... နိုင်ငံရပ်ခြား.ရေမြေခြားကနေပြီး RRAS သုံးပြီး ဒိုမိန်းကို လှမ်း၀င်လို့ရအောင်လုပ်လို့ရတယ်... central control လုပ်ကြတယ်... Group policy ပေးကြတယ်... Firewall လုပ်တယ်.... ဒီလိုမျိုး ၀ုိင်းလုပ်တယ် ဒိုမိန်းထောင်ပြီး ... အခုနောက်ပိုင်း File ရှယ်ယူချင်ရင် အင်တာနက်ကရပြီ.... Firewall ကိုလည်း Cisco တို့ တခြား product တွေက ၀ုိင်းထုတ်နေကြတယ်... routing ဘက်မှာလည်း Hardware တွေက မင်းမူထားတယ်... ဒီတော့ အင်တာနက်သုံးဖို့နဲ့ ဖိုင်ရှယ်လုပ်ဖိုရယ်လောက်ကိုပဲ နောက်ပိုင်းလို့တော့မယ်ထင်တယ်.... ဒီတော့ ၀င်းဒိုးဒိုမိန်းကဘယ်လိုဖြစ်မလဲမသိနိုင်အောင်ပဲ.... နောက် linux ကလဲ ဒိုမိန်းဘက်ကို မလိုက်ပဲ security ဘက်ကို ပဲ အရမ်းလုပ်နေတယ်.... linux ကပဲခေတ်ရှေ့ပြေးနေတာလား........................
အစ်ကိုရေ တကယ်ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် :77:
ကျွန်တော်က Xp & Server ဖြေပြီးရပ်နေတာ cicso ဘက်ကူးဖို့ စဉ်းစားနေတာ
ဒီ Post ကိုဖတ်ဖြစ်လိုက်မှပဲ ဆက်ဖတ်ဖိ်ု့့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီ။
အလုပ်က တဖက်မို့မအားတာ တစ်ကြောင်း တော်တော်တောင် ပြတ်နေပြီ
ဆရာ ဦးသိန်းဦးတို့့ သင်ပေးထားတာတွေ ငွေ့ငွေ့လေးပဲ ကျန်တော့တယ်
စာပြန်ဖတ်ဖို့့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် မအားတဲ့ကြားကပဲ ကြိုးစားပြီး ပြန်ဖတ်ပါ့မယ်
CCNA ဒီမှာ ဖြေချင်တဲ့သူတွေရှိရင် မြန်မြန်ပြောကြပါခင်ဗျာ......
Inspiration က mobile exam ကို လူ ၁၅၀ ပြည့်ရင်လုပ်ပေးမယ်ပြောတယ်......
ဖြေချင်သောသူများ exam center ကိုပြောထားကြပါခင်ဗျာ..........................